Huawei MapKit: Ọrụ map Huawei ga-arụ ọrụ na 2019 | Gam akporosis
Huawei MapKit: Arụ ọrụ maapụ ika
Edere Ferreno | | Huawei, Noticias
Izu gara aga nyere bido ogbako ndi mmepe nke Huawei. Na ihe omume a, na ụbọchị mmeghe ya, akara ndị China hapụụrụ anyị akwụkwọ akụkọ abụọ dị mkpa: EMUI 10 na ya HarmonyOS sistemụ arụmọrụ. Ahịa ndị China na-aga n'ihu ịkpọsa ozi ọma na ihe omume a na nke ọzọ ga-abụ Huawei MapKit, ọrụ maapụ nke ya.
A pụrụ ịhụ Huawei MapKit dị ka ụdị Google Maps, ma na nke a site na Huawei, ọ bụ ezie na ha anaghị achọ ịsọ mpi na ọrụ a. Companylọ ọrụ ahụ ekwupụtala na mbido ya ga-eme n'ọnwa Ọktọba nke afọ a. Ha na-emepe ugbua ụlọ ọrụ a maka ndị mmepe ka ha rụọ ọrụ na ya, dịka ha kwupụtara.
Ahịa ndị China na-achọ ịgbaso nzọụkwụ nke ụlọ ọrụ dịka Apple, Google ma ọ bụ Microsoft, ndị nwere ọrụ map ha ugbu a. Ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na ika ahụ ga-ebupụta ngwa nke aka ya, yabụ na ọ pụtaghị na ha ga-emepụta onye asọmpi maka Google Maps na nke a. Ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, ekwughi ihe ọ bụla gbasara atụmatụ ndị ụlọ ọrụ a nwere ike ime.
Na Huawei MapKit, ihe ụlọ ọrụ ahụ na-eme bụ mee ngwá ọrụ na koodu dịịrị ndị mmepe site na ọrụ maapụ gị. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ijikọ na ngwa ma ọ bụ na weebụ nke ndị mmepe kwuru. Ebumnuche nke ika ahụ bụ ịchọta ụzọ ọzọ maka usoro ndị dị ugbu a dị. Ya mere nke a nwere ike inyere ha aka n'ọdịnihu inwe ngwa map ha, ọ bụrụ na ha chọrọ, mana nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe kpatara nke a.
Dika amara ya rue ugbu a, A ga-ewepụta Huawei MapKit na ihe karịrị mba 150 dị iche iche. Na mgbakwunye, ọ ga-enwe nkwado maka ihe karịrị asụsụ 40, nke doro anya na-enye ohere iji ọrụ a ọtụtụ. Ndị mmepe na-eji ya arụ ọrụ ga-enwe ọtụtụ ọrụ dị. Ha ga-enwe ike hazie maapụ, tinye ihe nrịba ama, jikọta eziokwu dịwanye elu, mepụta atụmatụ ụzọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe ndị a bụ ọrụ anyị amaralarị maka ọrụ ọrụ map ndị ọzọ.
O yiri ka enweelarị ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụwa ndị nwere mmasị na-akwado ndị na-emepụta China na mpaghara a. Dabere na data ohuru, Yandez (ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị ukwuu na Russia) na Booking Holdings (ụlọ ọrụ dị n'azụ Booking.com) na ndị ụlọ ọrụ ahụ na-akparịta ụka ugbu a iji Huawei MapKit na nyiwe ha. Ọ bụ ezie na n'oge a anyị amaghị steeti mkparịta ụka ndị a na ụlọ ọrụ ndị a nọ. O doro anya na n'izu ndị a aha ọhụrụ ga-apụta nke na-egosikwa na ha nwere mmasị n'ọhịa a. Ya mere, anyị ga-ahụ ihe ụlọ ọrụ ndị ọzọ gosipụtara mmasị ha n'akụkụ a.
Akara ndị China na-ekwu nke ahụ enweworị ọdụ ụgbọelu nkwukọrịta ihe karịrị mba 160. Nke a bụ ihe nyelarịrị ha ohere ịnye ozi zuru ezu na data ntinye data satịlaịtị. Nke a na-eme ka anyị mata na ha na-akwado na nke a. Companylọ ọrụ ahụ ekwupụtala na a ga-emepe emepe ọhụrụ a maka ndị mmepe na njedebe nke afọ. O nwere ike ịbụ na Ọktọba, ma ọ bụ na Ọktọba, enweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ maka ugbu a. Yabụ n'ọnwa ndị na-abịanụ, anyị ga-ahụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ ndị a na mpaghara a.
Anyị ga-ege ntị na akụkọ ọhụrụ banyere Huawei MapKit izu ndị na-abịa. Ebe ọ bụ na ọkwa a na-abịa n'oge na-adịghị anya mgbe ika China hapụrụ anyị na sistemụ arụmọrụ ya. Anyị nwere ike ịhụ otu ụlọ ọrụ na-achọ ịdabere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ọkachasị ụlọ ọrụ America, mgbe ọ bịara inwe ụfọdụ ọrụ. Yabụ ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ụzọ ọrụ a ga-esi tinye n'ime ọrụ, ngwa ma ọ bụ ibe weebụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na-ahụ na enweela ndị nwere mmasị zuru oke. Kedu ihe ị chere gbasara mkpebi a ụlọ ọrụ mepụtara ọrụ maapụ ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei MapKit: Arụ ọrụ maapụ ika
Realme 5 na-eme njem nlegharị Geekbench na Snapdragon 665
HTC Wildfire X: Ekwentị ọhụrụ ahụ